Ciidamada PSF oo cayaaro u qabtay dhalinyarada Bosaaso(Sawiro)
Home /Blog/Ciidamada PSF oo cayaaro u qabtay dhalinyarada Bosaaso(Sawiro)
Ciyaarahan ayaa loogu magacadaray is dhexgalka dhalinta xaafahda iyo dhiiri galinta Nabdagalyada waxana qabsoomida Koobabkan soo qaban qabisyay Madaxada Ciidamda PSF, waxan ka soo qayb galay Wasiirkii Hore ee Amniga, Gudoomiha Gobolka Bari, Duqa Degamda Boosaaso, Agaasimaga Guud ee Ciidmada PSF Saraaisha Ciidmada Psf , Madaxda Xiirka kubada cagta Puntland iyo marti sharaf kale .
C/qani Jmaac Muuse oo ka mid ah Saraakiisha Ciidmada PSF ayaa ugu horayn halkaasi ka ahdalay, isgaoona xusay inay ugu talagaleen arimaha nabad galyada gobolka in lagu xoojiyo , dhalinyaradana lagu dhiiri geliyo dhanka iska dhexgalka iyo in nabadda ay ka shaqeeyaan.
Duqa degamda Boosaaso Eng Yaasiin Mire ayaa sheegay in koobkan ay soo qaban qaabiyeen Madaxada Ciidamda PSF uu yahay koob qayb qayn ka qadan doona dhanka amniga isagoona u mahadceliyay Madaxda PSF ee qaban qabisay.
Gudoomiha Xiirka Kubada Cagata Puntland Mustafe Majacase ayaa cayaartooyda u rajjayay natijo wanagasan,
Gudoomiyaha Gobolka Bari Dr Yuus Maxmed Wacays Dhedo ayaa sheegay in kooban uu noqon doono mid taariihko ah waxana uu umahad celiayay soo qabqanqaabiyaashii koobka.
Ciyaartii ugu horasay ayaa lagu daah fruray labada kooxood ee Horseed iyo Dayaxa, waxana guushu ku raacaday Horssed oo dhalisay 7 gool halka Dayaxana dadaashay oo ay afar dhilsay balse laga guulastay,
ciyaartii fiidnimo ayaaa waxaa ay dhex maraty Wadajir 1 iyo Oltoobar 2, waxaa rikoorayaa ku badisay kooxda xaafada Otoobar ciyaartaasi oo ahayd mid aad xiiso badan.
kooban aya socon doono mudo asbuuc ah waxana uu ka socudaa garoonka cagaarka ah ee Ciidamda PSF waxana xusid mudan kooxdii laga badiyo waxa ay horay ka racayasaa gaadiidkii horay u keenay .
5 Qof oo ku Dhintay Qarax ka Dhacay Muqdisho